The Irrawaddy's Blog: "ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပန်းချီဆရာ၊ သုဘရာဇာ"
"ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပန်းချီဆရာ၊ သုဘရာဇာ"
"ကျော်သူရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါက် အနုပညာရင်ဖွင့်သံပန်းချီပြပွဲ"
ပို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက ရဟန်းတော်တွေကို ဆွမ်း၊ ရေချမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ အဲဒီ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလကစပြီး အမေရိကန်အလည်အပါတ်ရောက်လာတဲ့ထိတိုင်အောင် ကျနော့် အနုပညာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အားလုံးကို ပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုကျနော်အမေရိကန်ကို အလည်ရောက်ခိုက်မှာ ကျနော့် နှလုံးသားနဲ့ ခံစားရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေ လူထုကိုပြသခွင့်ရခြင်းဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါက် အနုပညာရင်ဖွင့်သံလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
(ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပန်းချီဆရာ၊ သုဘရာဇာ)
First Breakout -- Artistic Expressions from the Heart -- Exhibition by Kyaw Thu
I have been denied all rights to artistic creation in Myanmar since September 2007, when I offered alms and water to monks walking in peaceful protest and reciting prayers of love during the Saffron Revolution, all the way to my current visit to the United States. I would like to call it the first breakout, the first artistic expressions from the heart, to be able to publicly exhibit the heartfelt works I have painted during my visit to America.
Kyaw Thu (film actor, director, producer, painter, undertaker)
May 26th - 27th 01:00 pm to 06:00 pm
May. 27th 6-8 pm
Place: PROJECT REACH
It's Between Canal St. and Hester St.